Sasatry ny mitady asa hafa ve ianao? Raha eny dia aza manahy fa miverina miaraka amin'ity rindrambaiko vaovao fantatra amin'ny anarana hoe iShareFans Apk ity isika anio. Aiza ny mpampiasa finday dia afaka mahazo vola mora foana amin'ny famitana ny lahasa isan-karazany toy ny Fitiavana, fijerena ary fizarana atiny samihafa.
Noho izany teo aloha dia nizara fampiharana mitovy amin'izany ho an'ny mpampiasa finday izahay. Saingy ny ankamaroan'ireo dia efa lany andro ary mety mandoa taratra ambany. Raha ampitahaina amin'ireo rindranasa tranainy indrindra dia amporisihinay hampiasa an'ity sehatra vaovao ity ny mpampiasa finday.
Satria vaovao izy ary manome valisoa lehibe amin'ny famitana asa maro. Mba hampisy valiny bebe kokoa ireo mpikarakara dia nanampy ireo serivisy fandoavam-bola marobe ireo. Noho izany ireo mpampiasa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia afaka mandray anjara sy mahazo vola.
Rehefa mandinika lalina ny fampiharana izahay fa tsy nahita ity fizarana valisoa ity. Izay homena valisoa ireo mpandresy isa tsy manam-petra anisan'izany ny famerenam-bola. Ka izao dia tanteraho amin'ny fotoana voatondro ny asa, dia hifidy ny mpilatsaka ho fidiny ho valisoa valisoa.
Ankoatr'izay, rehefa manamarina ny fizotran'ny fisoratana anarana isika fa tsy mila laharana finday. Aza manahy momba ny kaody firenena satria ny fametrahana ny isa dia haka ho azy ny toerana misy ny firenenao. Ary alefaso ny mpandray anjara amin'ny resaka fidirana amin'ny tabilao.
Rehefa tafita amin'ny fisoratana anarana ny mpampiasa. ny Mahazo App dia hisintona ho azy ny mpampiasa mankany amin'ny pejy fandraisana App. Aiza ny endri-javatra rehetra ao anatin'izany ny sokajy azo tratrarina miaraka amin'ny antsipiriany feno momba ny fisintonana vao haingana. Ankoatr'izay, ny mpampiasa dia afaka mikaroka asa vaovao ho avy mialoha.
Azony atao ny manomana sy manome fitaovana mialoha ny tenany. Ankoatra ireo safidy ilaina rehetra ireo dia mikasa ny hanampy endri-javatra vaovao misimisy kokoa ireo mpamorona. Ao anatin'izany ny fampiakarana avo lenta ny protégels fiarovana miaraka amin'ny rafitra fandoavam-bola mialoha ao amin'ny I Share Fans App.
Inona ny iShareFans Apk?
Araka ny efa noresahintsika tetsy ambony, sehatra fidiram-bola an-tserasera izy io ahafahan'ny mpampiasa finday mahazo vola tsy manam-petra mora foana. Mampiseho ny fandraisan'anjaran'izy ireo ao anatin'ny lahasa samihafa ary mahazo valisoa tsy misy farany amin'ny famitana ireo asa ireo.
Ireo asa dia mety ahitana hetsika haino aman-jery sosialy samihafa mifandraika amin'ny TikTok, YouTube, Facebook ary Instagram. Ankoatry ny fandraisana anjara dia afaka mitantana ny orinasany amin'ny sehatra iray ihany ireo mpampiasa ivelany. Anisan'izany ny fampiroboroboana ny kaonty media sosialy miaraka amin'ireo pejy mpankafy.
Anaran'ny fonosana eu.eyu583
SOKAJY Apps - Social
Na olona miampy arivo aza dia efa nahavita ny asany tamina lampihazo. Ary afaka manome toky isika fa nandao ny forum tamin'ny fanamarihana tsara izy ireo noho ny fitarihana tsara. Noho izany, any ivelany any dia afaka manararaotra tanteraka io fotoana io ihany koa ny olona.
Amin'ny efijery an-trano dia samy manaisotra ny mombamomba ny mpampiasa koa ireo mpikambana vao voasoratra anarana. Ny ampahany ankafizinao indrindra dia ny contact us platform. Noho izany ireo izay miaina olana eo am-panaovana orinasa na fisintomana vola.
Azon'izy ireo ampiasaina ireo sehatra fifandraisana telo voasokajy isan-karazany ireo. Izay loharanom-pifandraisana isan-karazany dia azo ampiasaina ao anatin'izany ny isa WhatsApp. Ka anjaran'ny mpampiasa izao ny sehatra tiany hampiasaina. Saingy manome sosokevitra ireo mpandray vola an-tserasera izahay hametraka ny App iShareFans.
Ny fametrahana Apk dia hanolotra fotoana samihafa.
Mba hahazoana vola dia mila mamita asa samihafa ny mpampiasa.
Ireo asa dia ho mora tratrarina ao anaty kaonty dashboard.
Ilaina ny miditra amin'ny fisoratana anarana amin'ny solaitrabe.
Ho an'ny fisoratana anarana dia voatery ny laharana finday.
Tsy mihazona doka avy amin'ny antoko fahatelo ny App.
Ho fampandehanana mora, nanampy manam-pahaizana maro ny fomba fandoavam-bola.
Raha mikasika ny interface-n'ny mpampiasa dia sariaka finday fotsiny izy io.
Ho an'ny fisintomana ny kinova nohavaozina amin'ny Apps. Afaka matoky ny tranonkalantsika ny mpampiasa Android satria tsy mizara afa-tsy Apps niandohana izahay. Alohan'ny hanomezana ny fizarana Apk ao anaty fampidinana dia mametraka rakitra mitovy amin'ny fitaovana samihafa izahay.
Izahay dia manome ny fizarana fampidinana ao anaty Apk, rehefa manolo-kevitra tanteraka ny fisian'ireo rakitra aman-drakitra mba tsy hampiasaina. Ho fisintomana ny kinova farany an'ny iShareFans Apk dia tsindrio ny bokotra rohy fampidinana azo.
Anisan'ireo sehatra ahazoana fidiram-bola an-tserasera. Manoro hevitra ny mpampiasa finday izahay hiaina ny Fampiharana iShareFans avy eto amin'ny safidy iray-tsindry iray. Na izany aza, na dia eo aza ny fampiasana raha sendra misy ny olana dia afaka mifandray aminay malalaka izy.
Sokajy Social, Apps Tags Mahazo App, Mizara mpankafy Apk aho, iShareFans Apk, App iShareFans, Fampidinana iShareFans Post Fikarohana